🍒Fastpay Casino - Kunyoresa, Saiti Yepamutemo, Verification
FastPay Casino >Ongororo yeiyo FastPay kasino kunyoresa maitiro
Ongororo yeiyo FastPay kasino kunyoresa maitiro
Pamhepo kasino kunyoresa mitemo
Zvikumbiro zvekusimudzira zvevatengi vatsva
Maitiro ekugadzira account
Kuzivikanwa Chitupa ku FastPay Casino
Kuvhara uye"kutonhora" account
Maitiro ekuita yako yekutanga kubheja mu Fastpay?
Inobvumidzwa FastPay Casino chirongwa chepasirese chakatangwa muzhizha ra2018. Iyo inopa vese vanofarira kubhejera katarogu hombe yemitambo yeyese kuravira - kubva kune yakasarudzika tafura mitambo kusvika kune yekucheka kumucheto slots. Zviri nyore kwazvo kuva mutengi wekasino iyi - kunyoreswa paFastPay kasino hakutore nguva yakawanda.
Fastpay webhusaiti yepamutemo inoshanda mukati megadziriro yemitemo yenyika dzese dzekubhejera, zvichibva pane rezinesi riri mudunhu reCuracao. Neichi chikonzero, vanhu chete vanopfuura makore gumi nemasere ekuberekwa panguva yekunyoresa ndivo vanogona kuve kasino mutengi.
Mutemo wechipiri wakakosha iakaunzi imwe. Makasino epamhepo anorambidza kuumba nhoroondo inopfuura imwechete yekubhejera pamunhu. Vagari venyika zhinji dzenyika vanogona kuve vatengi veFastPay, kunze kwenyika dzinotevera:
Portugal, Gibraltar, France nenzvimbo dzayo dzekunze;
USA, Bulgaria, Jersey, Netherlands, Israel;
Mimwe mitambo kubva mukabhuku yacho inogona kunge isingawanikwe kune dzimwe nyika.
Munguva yekunyoresa maitiro, mutambi anozvipira kudzidza ese mirawo yepamhepo kasino uye obvumirana navo. Zvinokurudzirwa kuti usarege hanya nemaitiro aya, ruzivo rwemitemo runodzivirira kukakavara kwakawanda.
Kutyorwa kwemitemo yeFastPay kunogona kukonzera kuvharirwa kweakaunzi.
Vashandisi vese vakanyoresa neFastPay vanogona kutarisira bhonasi yekutanga yekuisa. Iyo yakanyanya huwandu hwemubhadharo i100 USD/EUR kana 865 NOK, 127 CAD, 130 AUD, 138 NZD, 375 PLN, 1500 ZAR, 10650 JPY, 0.01 BTC, 1.9 LTC, 0.256 ETH, 0.05 BCH, 44000 DOGE ... Huwandu hwemari dzemabhonasi hunowanikwa zvichibva pa100% yehukuru hwedhipoziti.
Bhonasi inoitwa kana iyo account yadzokedzwazve, iyo promo kodhi haina kudikanwa. Sekuwedzera-on, mutambi anowana zana emahara spins pane slot michina. Vanoremekedzwa zvakaenzana - makumi maviri emahara ekuruka mukati memazuva mashanu kubva musi wedhipoiti.
Kuti ushandure mari dzemabhonasi kuti dzive mari chaidzo, unofanirwa kuisa mabheti mune imwe mari inozopeta ka50 huwandu hwebhonasi yakaunganidzwa.
FastPay ine yechipiri dhipoziti bhonasi. Inobhadhariswa muchimiro che75% yemari yemari. Iyi bhonasi yakapetwa ka2 pane yekutanga bhonasi.
Unogona kunyoresa FastPay kasino pane saiti huru, kana pagirazi rayo. Kunyoresa kunowanikwa kubva kumakomputa, smartphone uye piritsi.
Kugadzira account, tinya bhatani"Nyoresa". Iyo iri pamusoro pesaiti, ine ruvara girini. Kubaya bhatani kunozadza fomu rekunyoresa neminda inotevera:
password - zvinokurudzirwa kudoma mubatanidzwa wakaomesesa;
mari - unofanirwa kusarudza imwe yemari inowanikwa - USDT, USD, EUR, DOG, BCH, LTC, ETH, BTC, ZAR, JPY, PLN, NZD, AUD, NOK, CAD.
Minda yese inodiwa. Mushandisi anofanira zvakare kutarisa bhokisi"Ini ndinobvumirana nemitemo." Padanho rekunyoresa, iwe unogona kunyorera kune yekusimudzira tsamba yekutumira, kana kuzvinyoresa kubva pairi. Tsamba iyi inosanganisira zvinonakidza zvinopihwa, nhau dzekasino. Unogona kuimisazve muaccount yako wega.
Mushure mekubaya bhatani re"Rejista", kasino inotumira tsamba ine chinongedzo kune yakasarudzika e-mail. Inodikanwa kuti ishandiswe - mushandisi anogona kudzvanya pane iyi link akananga mutsamba, kana kukopa nekuinama mubara rekero rebrowser. Kana meseji kubva kuFastPay isiri muInbox yako mukati memaminitsi makumi matatu, iwe unofanirwa kuvhura iyo Spam folda, uko meseji ingadai yakawanikwa nekukanganisa.
Account activation inobvumidza iwe kuti upinde ne password uye email. Muaccount yako wega, unofanirwa kuvhura chimiro uye zadza ruzivo rwusipo nezvako. Yese data inofanirwa kuve yakarurama. Unogona kuwedzera mamwe maaccount emari muaccount yako - kasino haigumiri vatengi vayo kune imwe mari.
Vashandisi chete vanovimbiswa vanogona kushandisa zvizere ese epamhepo kasino masevhisi. Kubviswa kwemari kubva kuaccount yemitambo kunovhurwa chete mushure mekuzivikanwa kwemunhu. FastPay inogona kukumbira ongororo chero nguva, asi zvirinani kuti uzviite wega nekukurumidza mushure mekunyora.
Iyo Casino inovimbisa kuchengetedzeka kwemunhu data. Kuti uve nechokwadi, unofanirwa kuvhura iyo"Akaundi" peji mune yako wega account uye enda kune"Zvinyorwa" chikamu. Pano iwe unofanirwa kuisa scan kana pikicha yepasipoti yako, kana rimwe gwaro rinogona kuratidza kuzivikanwa kwako. Mufananidzo wacho unofanirwa kunge uri wehunhu hwakanaka.
Sekuwedzera kune pasipoti, ungangoda chirevo chebhangi, invoice yekubhadhara kutaurirana, zvichingodaro. Gwaro rinofanirwa kuve nemavheti anoenderana nepasipoti. Iyo yakanyanya nguva yekutarisa zvinyorwa zvakatumirwa maawa makumi maviri nemana. Iyo kasino inochengetera kodzero yekukumbira mamwe magwaro, vhidhiyo kana kufona.
Kana iwe uine chero mibvunzo nezve chako kuzivikanwa, vatambi vanogona kubata rutsigiro. Inoshanda 24/7 uye inowanikwa kuburikidza nepamhepo chat uye email.
FastPay online kasino vatengi vane mvumo yekudzima yavo yemitambo account chero nguva. Akaundi inogona kuvharwa nekubata timu yekutsigira.
Kana mutambi asingapinde muaccount yake yega kwemwedzi mitanhatu, asingaise kubhejera uye asingaite mari, saka account yake inomiswa. Kuchenesa account hakusi kuvhara, kunogona kumiswazve.
Unogona kuisa kubheja kukasino ipapo mushure mekunyora. Mari dzinozivikanwa ipapo ipapo. Iyo shoma dhipoziti huwandu i0.01 BTC, 14 NZD, 10 EUR/USD, 37 PLN, 13 CAD, 4400 DOGE, 0.2 LTC, 13 AUD, 151 ZAR, 0.05 BCH, 1060 JPY, 0.025 ETH, 87 NOK. Iyo kasino haibhadharise komisheni yekuzadzikiswa, asi inogona kumisikidzwa neyekubhadhara system.
Mushure mekunge mari yave kudanwa, zvinosara kusarudza mutambo wakakodzera. FastPay inopa kutamba slot michina, mitambo yetafura, Live kasino nevatengesi vapenyu. Inopfuura 1000 mitambo inowanikwa pane ino saiti. Slot michina inogona kuwedzerwa kuyedzwa mune yemahara mode. Kune akasiyana akasarudzika ekubheja pane cryptocurrency.
Vese vatengi vatsva vepamhepo dzokubhejera vanozove nhengo dzeyakavimbika system. Pfungwa dzinopihwa yekushandisa kwakasimba kweiyo FastPay masevhisi. Ivo vanoona danho remutambi muchirongwa chekuvimbika. Chikamu chega chega chinopa ropafadzo dzayo. Semuenzaniso, vatambi vane wechipiri uye wepamusoro chikamu checasino vanopa chipo chekuzvarwa.
Akaunganidzwa mapoinzi kana mamiriro emamiriro anogona kuchinjaniswa nemari chaiyo. Unogona kuchinjana kamwe chete pagore - muvhiki yekupedzisira yaZvita.
. Zviri nyore kunyoresa pane saiti - iwe unofanirwa kuzadza fomu pfupi. Iyo kasino inokumbira chitupa kuti isimbise kuzivikanwa - iyi ndiyo nzira yakajairika mune ese epamutemo macasino epamhepo.